हाम्रा नेता ज्यू ले पनि यस्को सिको गरे कसो होला ? नेदरल्याण्डका प्रधानमन्त्री दैनिक साइकल चढेर कार्यालय जान्छन् – सुदूरखबर डटकम
हाम्रा नेता ज्यू ले पनि यस्को सिको गरे कसो होला ? नेदरल्याण्डका प्रधानमन्त्री दैनिक साइकल चढेर कार्यालय जान्छन्
नेपालमा राष्ट्रपती–उपराष्ट्रपती, प्रधानमन्त्री लगायतका विशिष्टहरुको सवारी हुँदा सर्वसाधारणले धेरै दुःख पाउछन्। उनीहरुको सवारी हुँदा सडक खाली गराइ लामो समयसम्म ट्राफिक जाममा पर्दा सर्वसाधारणले पाउनु सम्मको सास्ती पाउँछन्। नेपालका राष्ट्रपती,प्रधानमन्त्री,मन्त्रीहरु लगायत विशिष्ट ब्यक्तिहरुलाई कहिकतै बाट कुनै किसिमको धम्की आएको पनि सुनिएको छैन। तर अमेरिका,रुस, बेलायत,भारत, इजरायल लगायतका राष्ट्रप्रमुखको भन्दा धेरै सुरक्षा नेपालका राष्ट्रपती,प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट ब्यक्तिहरुलाई दिइन्छ।
अनुशासन,मितव्यिता र असल संस्कार नेताहरुले जनतालाई सिकाउने हो।तर हाम्रो जस्तो गरिब देश नेपालका नेताहरु सत्ताको दुरुपयोग गर्दै जनताले तिरेको करमा लुटतन्त्र मच्चाउछन्,मोजमस्ती गर्छन्।उनीहरुले मितव्ययिता अपनाएको फजुल खर्च रोकेको र जनताले तिरेको करको सम्मान् गरेको कहिकतै सुनिएको छैन। नेपालमा राजतन्त्र त सक्कियो तर अहिलेका नेता र सत्तामा पुगेकाहरुले राज्यकोष दोहन गरेर गरिब देशलाई झन्- झन् गरिब बनाएका छन्।न उनीहरुले नेदरल्याण्डका प्रधानमन्त्रीबाट केहि सिक्छन् न उनीहरु आफैले केहि उदाहरणीय काम गरेर देखाउँछन्। उनीहरु सामन्ती राजा माहाराजा भन्दा केहि कमि छैनन्। अझैँ उपल्लो दर्जाका होलान्
दक्षप्रजापतिको तेत्तिसकोटी कन्या मध्य दक्षिणकाली पनि एक ह’न् । उनले आसन लिने क्रममा शिखरापुर नगरको शिरोभाग अर्थात नगरचो डाँडा (शेषनारायणको शिरमा रहेको गोरखनाथ माथिको डाँडामा विराजमान भएकी हुन् । जङ्गलको मध्य भागमा शिलामा बिराजमान भएकी दक्षिणकालीको बारेमा कसैलाई पनि जानकारी नभई पुजाआजा समेत भएको थिएन । त्यसै समयमा १८२५ तिर प्रताप मल्ललाई राति सपनामा दक्षिणकालीले आफू दक्षिणकाली
भएको र फर्पिङ देखि माथि नगरचो डाँडामा शिलामा बिराजमान भएको बताईन् । सपनामा त्यति देखाएतापनि राजाले त्यति ख्याल नदिएकाले दरवारकै पञ्चकन्या मध्य एउटी कन्यालाई दक्षिणकाली प्रकट भई आफू बसेको स्थान र पुजाआजाको बारेमा बताएकी हुन् । यति थाहा पाए पछि राजा प्रताप मल्लद्वारा तान्त्रिक गुरु लम्बकर्ण भट्टको सहयोगमा प्राचिन दक्षिणकालीको शिला भएको स्थानमा आई विधि पूर्वक पूजा गराईयो । त्यसपछि भूषाकर्ण नामक दुई राक्षस उत्पन्न गराई राजाको सपना अनुसार गर्न आदेश दिए । उनको सपना अनुसार दक्षिणकाली र उनको गण सहित एक रातमा बोकी त्यहाँ देखि दक्षिण तर्फको दुई नदिको शिरोभागमा अर्थात हालको दक्षिणकाली माताको मन्दिर भएको स्थानमा उक्त शिला नै स्थापना गरियो । त्यसै क्रममा कुमारीलाई हालको कुमारी मन्दिर भएको स्थानमा स्थापना गरियो । गणेशलाई भने लैजाने क्रममा विहानको भाले बासेपछि पौचो डाँडामा बिसाएर सोही ठाउँमा सिद्ध गराईएको
किम्बदन्तिहरुमा पाईन्छ । दक्षिणकालीको उक्त मन्दिर पनि जङ्गलको बिचमा, डाँडाको टुप्पोमा गुफा भित्र राखिएकाले उक्त स्थलमा मानिसहरु नजाने र गएका मानिसहरु पनि पछिल्लो व्यक्ति नफर्कने भन्ने जनश्रुति पाईयो । त्यस पश्चात प्रताप मल्लले नै गुरु लम्वकर्ण भट्टलाई दक्षिणकालीलाई तान्त्रिक बिधिद्वारा निष्तेज गर्न लगाई हालको दक्षिणकाली माताको शिलामूनि घोप्टो पारी माथि पट्टी ठूलो शिलाले छोपी कालीको मुखाकृति बनाई अगाडि भैरव समेत राखी स्थापना गराईयो । त्यसपछि प्रताप मल्लले चामुण्डाको (दक्षिणकालीको) सेतो संहमरमरको मूर्ति बनाउन लगाएका थिए । उक्त मूर्तिमा प्राण प्रतिष्ठा पछि निकै नै शक्तिशालि हुने तान्त्रिकहरुले बताए ।
त्यसपछि राजा प्रताप मल्लले आफ्नै दरवारको चोकमा रहेको एउटा कोठामा थुनि बाहिरवाट दुईवटा ठूल्ठूला सिंहहरु स्थापना गराई राखे । राजाले पुन कालो पथ्थरको मूर्ति बनाउन लगाई पूर्णवति गंगा र उद्धारवति गंगाको दोभानमा स्थापना गराएका थिए । त्यहाँ उनले अष्ट मात्रिका सहित पुजाआजा चडाउँदै आए । त्यस पछि बिस्तारै भक्तजनहरु पुजाआजा गर्न जाने क्रम बड्दै गयो । साक्षात दक्षिणकाली शक्तिकी देवी भएकाले नेपाल, भारत लगाएत बिभिन्न देशहरुवाट हिन्दु धर्मावलम्बीहरु यस मन्दिरमा आएर पुजाआजा गर्छन् । आफूले चिताएको काम पुरा हुने भएका कारण हालका दिनहरुमा हजारौं दर्शनार्थीहरुको भिड लाग्ने गरेको मन्दिरको पुजारी बताउनु हुन्छ ।
#Source: Flash Khabar फ्ल्यास खबर